बलिउड / हलिउड Archives - Page 22 of 31 - Purbeli News
बाहुबली हिरो प्रभासलाई एकैपटक ६ हजार युवतीबाट आयो विहेको प्रस्ताव
मुम्बई । सिनेमाघरमा प्रदर्शनरत बलिउड फिल्म ‘बाहुबली २’ का अभिनेता प्रभासलाई ६ हजार युवतीले विहेको प्रस्ताव राखेको खबर बाहिरिएको छ । एक अन्तर्वार्ताका क्रममा प्रभासले यो कुराको खुलासा गरेका हुन् । सुन्दर अनुहार, गठिलो शरीर र प्रतिभाका कारण बलिउडका सुपरस्टार तीन खान (शाहरुख, सलमान र आमिर) भन्दा पनि ठूला स्टारमा रुपमा हेरिन थालिएका प्रभासलाई बाहुबल...
सुपरहिट फिल्म ‘बाहुबली-२’ का कुन कलाकारको कति तलब ? (सूचीसहित)
एजेन्सी । विश्व फिल्मी बजारमा धमाकेदार कारोबार गरिरहेको बलिउडको सबैभन्दा महंगो फिल्म ‘बाहुबली–२’ का प्रमुख कलाकारको पारिश्रमिक सूची सार्वजनिक भएको छ । भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार फिल्मका मेन हिरो प्रभासले २५ करोड पारिश्रमिक लिएर बलिउडमै सबैभन्दा बढी पारिश्रमिक लिने अभिनेता छन् । यो पारिश्रमिकबाट प्रभासले बलिउडमा नयाँ रेकर्ड बनाएका हुन् । यस्तै...
भारतकी चर्चित नायिका साेनाम कपुरले खुलेअाम कार्यक्रममा भित्री बस्त्र नलार्इ हिडेपछि (भिडियाे सहित)
एजेन्सी । आफूलाई सुपर हिट बनाउनका लागि ग्ल्यामरको दुनियामा अगाडि बढ्न खोजिरहेका हुन्छन् । नयाँ–नयाँ पहिरन लगायत थुप्रै तरिका अपनाइरहेका हुन्छन् । ग्ल्यामरको दुनियामा यस्तै तरिका सोनम कपुरले एक अवार्ड वितरण कार्यक्रममा अपनाएकी छन् । उनलाई देख्दा भित्री बस्ननै लगाएको छैनकी जस्तो लाग्दै थियो । ग्ल्यामर दुनियामा यसले आफ्नो इमेज त बढाउँछ तर, कहिलेकाँह...
विनोद खन्नाको अन्त्येष्टीमा नपुगेका यी ९ बलिउड कलाकार – आखिर किन गएनन ?
एजेन्सी । बिहिबार ७० वर्षको उमेरमा विनोद खन्नाको क्यान्सरको कारण निधन भयो। विनोदको अन्तिम संस्कारमा अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर सहित बलिउडका हस्तीहरु पुगे तर बलिउडका टप स्टार शाहरुख, सलमान, आमिर र अक्षय अन्तेष्टीमा सामेल भएनन्। यहि कुरामा ऋषि कपुरले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै कडा निन्दा गरे। नयाँ पुस्ताकाले पुराना पुस्ताकालाई इज्जत दिन नजानेको बताउँदै ऋषिल...
पहिलाे दिनमै बाहुबली २ ले कमायाे सय कराेड बढी : राखयाे नयाँ रेकर्ड
एसएस राजमौली निर्देशित फिल्म ‘बाहुबली- द कन्क्लुजन’ ले भारतीय सिनेमा जगतमा इतिहास कायम गरेकाे छ । हिन्दि सिनेमाकाे जगतमा एकै दिन सय कराेड माथिकाे काराेबार गर्ने याे फिल्म सायदै पहिलाे रहेकाे निर्माताहरूले दाबी गरेका छन । यस अघि रिलज भएकाे पहिलाे दिनमै सलमान खानको ‘सुल्तानले ३६ कराेड र आमिर खानको ‘दंगल’ले २९ कराेडकाे काराेबार गरेर रेकर्ड राखेकाे थि...
बाहुबली २ ले राख्याे नयाँ रेकर्ड : एउटा टिकटकाे मुल्य २४०० : दिल्लीमा फिल्म हेर्न छुट्टीकाे माग
नयाँदिल्ली । ट्रेलर सार्वजनिक भएलगत्तै अाम दर्शकहरूकाे काैतुहलता बढेकाे बाहुबली २ ले भारतकाे फिल्म इन्डस्ट्रिजमा नयाँ रेकर्ड राखेकाे छ । फिल्म प्रदर्शन भएसंगै नयाँ दिल्लिमा रू २४०० ( दुर्इ हजार चार सय )का दरले टिकट बिक्री गरेर यसले नयाँ रेकर्ड बनाएकाे हाे । याे भन्दा अघि यस्तै रेकर्ड बनाउन सफल एेसर्या बच्चनकाे फिल्म ये दिल हे मुस्किललाृइ समेत उछिन...
बलिउड नायक बिनाेद खन्नाकाे निधन
एजेन्सी । बलिउडका पुराना तथा चर्चित नायक बिनाेद खन्नाकाे ७० बर्षकाे उमेरमा बिहीबार बिहान निधन भएकाे छ । लामाे समयदेखी क्यान्सरसंग जुधिरहेका बलिउड नायक खन्नाकाे रिलाएन्स फाउन्डेसन अस्पतालमा निधन भएकाे हाे । सय भन्दा बढी हिन्दि फिल्ममा नायककाे भुमिका निर्वाह गरिसकेका खन्नाकाे निधनसंगै बलिउड शाेकमा डुबेकाे छ । खननाकाे दुई छोरा र एक छोरी रहेका छन्...
अमिताभसंग सोनाक्षीको यस्तो सपना
काठमाडौं। बलिउड फिल्म ‘दबंग’बाट आफ्नो अभिनय सुरु गरेकी सोनाक्षी सिन्हा आगामी फिल्म ‘नुर’मा पत्रकारको भूमिकामा देखा पर्ने भएकी छिन् । सोनाक्षी वास्तविक जीवनमा पनि पत्रकारको भूमिकामा रहेर अमिताभ बच्चनको बारेमा धेरै कुरा जान्न चाहन्छिन् । बीबीसीसंग कुरा गर्दै उनले भनिन्, ‘अमिताभ बच्चनको जिन्दगी एकदमै रोचक छ । त्यसैले एक पत्रकारको भूमिकामा रहेर उनको ज...
कपिलको शो बन्द गरेर सोनीले सुनिललाई छुट्टै शो सञ्चालन गर्न दिने
एजेन्सी । भारतिय कमेडियन बादसाहकाे उपनाम पाउका कपिल सर्मा र शुनिल ग्राेभरबिच बिवाद भएपछि साेनी च्यानलले द कपिल शर्मा साे बन्द गर्न सक्ने र शुनिल ग्राेभरलार्इ अर्कै कार्यक्रा सञ्चालन गर्न दिने तयारी थालेकाे भारतिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन । कपिलकै कारण साेनी च्यानलले १०७ करोड भारु नाेक्सान ब्यवहाेरनू परिरहेकाे कारण च्यानलकाे टिअारपी पनि घटेकाे ...
भारतीय क्रिकेटर सचिन तेन्दुलकर अब गायक पनि, गीत रिलिज संगै गित बन्याे ‘भाइरल’ (भिडियाे सहित)
मुम्बई, चैत २५ / भारतीय क्रिकेटर सचिन तेन्दुलकरलाई अब गीत–संगीतमा पनि देख्न पाइने भएको छ । सचिनले नयाँ अवतारमा देखिनेक्रममा हालसालै एक गीत गाएका छन् । उनले चगायक सोनु निगमसँगै गीत गाएका हुन् । आफ्नो एप ‘१०० एमबी’ का लागि सचिनले ‘नाचो सारे क्रिकेट वाली बीट पे’ बोलको गीत गाएका हुन् । सचिनले गाएको पहिलो गीत रिलिज भएको २४ घण्टामै १० लाखभन...